Umatshini wokuthengwa kwesichumiso se-tonic oziitoni ezingama-50,000 - YiZheng Heavy Machinery Co., Ltd.
Ukuphuhlisa ezolimo eziluhlaza, kufuneka kuqala sisombulule ingxaki yongcoliseko lomhlaba. Ingxaki eziqhelekileyo emhlabeni zezi: ukuxinana komhlaba, ukungalingani kwamaminerali isondlo, umxholo ophantsi wezinto eziphilayo, ukulima okungenzulwanga, i-acidification yomhlaba, i-salinization yomhlaba, ungcoliseko lomhlaba, njl. Umhlaba kufuneka uphuculwe. Ukuphucula umxholo wezinto eziphilayo zomhlaba, ukuze kubekho iipellets ezininzi kunye nezinto ezimbalwa eziyingozi emhlabeni.
Sinikezela ngenkqubo yoyilo kunye nokuveliswa kweseti epheleleyo yemigca yemveliso yezichumiso. Izichumisi zendalo zingenziwa ngentsalela yemethane, inkunkuma yezolimo, imfuyo kunye nomgquba weenkukhu kunye nenkunkuma kamasipala. Ezi nkunkuma zezinto eziphilayo zifuna ukwenziwa kwakhona ngaphambi kokuba ziguqulwe zibe zizichumiso zezinto eziphilayo ezithengiswayo. Utyalo-mali ekuguquleni inkunkuma ibe bubutyebi kufanelekile.
Umgca wemveliso yesichumiso esitsha se-organic esiveliswa ngonyaka iitoni ezingama-50,000 isetyenziswa ngokubanzi kwimveliso yezichumiso zezinto eziphilayo ezinenkunkuma yezolimo, imfuyo kunye nomgquba weenkuku, udaka kunye nenkunkuma yasezidolophini njengezinto eziphilayo ezingafunekiyo. Umgca wemveliso iphela awunakuguqula inkunkuma eyahlukileyo yezinto eziphilayo ibe sisichumiso esinezinto eziphilayo, kodwa ikwazisa izibonelelo ezikhulu zokusingqongileyo nezoqoqosho.
Izixhobo zokuvelisa isichumiso se-Organic ikakhulu zibandakanya i-hopper kunye ne-feeder, i-drum granulator, isomisi, umatshini wokugaya i-roller, ukuphakamisa ibhakethi, ukuhambisa ibhanti, umatshini wokupakisha kunye nezinye izixhobo ezincedisayo.
Izinto ezisetyenziswayo ngokubanzi
Umgca wemveliso entsha yesichumiso unokusetyenziswa kwizinto ezahlukeneyo zezinto eziphilayo, ngakumbi umququ, intsalela yotywala, intsalela yebhaktiriya, intsalela yeoyile, imfuyo kunye nomgquba weenkukhu kunye nezinye izinto ekungekho lula ukuzithengisa. Ingasetyenziselwa unyango lwe-humic acid kunye nodaka lwelindle.
Oku kulandelayo kukwahlelwa kwezinto zokwenza imveliso kwimigca yemveliso yezichumiso eziphilayo:
1. Inkunkuma yezolimo: umququ, intsalela yeembotyi, i-cotton slag, i-rice bran, njl.
2. Umgquba wezilwanyana: umxube womgquba weenkuku kunye nomgquba wezilwanyana, ezifana neendawo zokuxhela, inkunkuma evela kwiimarike zentlanzi, iinkomo, iihagu, iigusha, iinkuku, amadada, irhanisi, umchamo weebhokhwe kunye nelindle.
3. Inkunkuma yemizi-mveliso: intsalela yotywala, intsalela yeviniga, intsalela yecassava, intsalela yeswekile, intsalela yendalo, njl.
4. Inkunkuma yasekhaya: inkunkuma yokutya, iingcambu kunye namagqabi emifuno, njl.
5. Udaka: udaka oluvela emilanjeni, kwimijelo yogutyulo, njl.
Umgca wemveliso yezichumiso eziphilayo uqukethe idumper, umxube, isityumzi, igranulator, isomisi, isipholisi, umatshini wokupakisha, njl.
Umgca wemveliso entsha yesichumiso se-organic uneempawu zokusebenza okuzinzileyo, ukusebenza ngokukuko, ulondolozo olululo kunye nobomi benkonzo ende.
1. Oludidi alulungelanga kuphela izichumiso eziphilayo, kodwa kunye nezichumiso zebhayoloji eziphilayo ezongeza iintsholongwane ezisebenzayo.
2. Ububanzi besichumiso bunokuhlengahlengiswa ngokweemfuno zabathengi. Zonke iintlobo zezichumisi zesichumisi eziveliswe kumzi-mveliso wethu zibandakanya: iigranulators ezintsha zezichumiso, ii-granulators zediski, ii-granulators zesicaba, iigubu zegubu, njl njl.
3. Isetyenziswa kakhulu. Ingaphatha izinto ezahlukeneyo zokwenza izinto, ezinje ngenkunkuma yezilwanyana, inkunkuma yezolimo, inkunkuma yokuvumba, njlnjl. Zonke ezi zinto ziphilayo zingaqwalaselwa zenziwe iibhetshi zezichumiso zegranular yorhwebo.
4. Ukuzenzekelayo okuphezulu kunye nokuchaneka okuphezulu. Inkqubo yezithako kunye nomatshini wokupakisha ulawulwa ziikhompyuter kunye noomatshini.
5. Umgangatho ophezulu, ukusebenza okuzinzile, ukusebenza okufanelekileyo, isidanga esizisebenzelayo kunye nobomi benkonzo ende. Sithatha iakhawunti epheleleyo yamava omsebenzisi xa uyila kwaye uvelisa oomatshini bokuchumisa.
Iinkonzo ezongezwa ngexabiso:
1. Umzi mveliso wethu unokunceda ukubonelela ngocwangciso lwelayini yokwenene emva kokuqinisekiswa kwezixhobo zomthengi.
2. Inkampani iyangqinelana ngqo nemigangatho efanelekileyo yobugcisa.
3. Vavanya ngokwemigaqo efanelekileyo yovavanyo lwezixhobo.
4.Ukuhlolwa okungqongqo ngaphambi kokuba imveliso ishiye umzi-mveliso.
Ukuhlaziywa kwemfuyo kunye nokukhulelwa kwenkukhu kunye nezinye izinto ezingafunekiyo zingeniswe ngqo kwindawo yokubila. Emva kokuvumba kunye nokuguga kwesibini kunye nokufumba, ivumba lemfuyo kunye nomgquba weenkukhu uyasuswa. Iibhaktheriya ezinegwele zinokongezwa kweli nqanaba ukubola imicu erhabaxa ekuyo ukuze iimfuno zobukhulu bamasuntswana zokutyunyuzwa zikwazi ukuhlangabezana neemfuno zegranularity yemveliso yegranulation. Ubushushu bempahla eluhlaza kufuneka bulawulwe ngokungqongqo ngexesha lokuvumba ukuthintela ubushushu obugqithisileyo kwaye kuthintele umsebenzi wentsholongwane kunye nee-enzymes. Oomatshini abahambahambayo beflip noomatshini bokusetyenziswa kwehydraulic basetyenziswa kakhulu xa kufakwa, kuxutyushwa kwaye kukhawuleziswa ukuvundisa izitaki.
2. Isichumisi esityunyuziweyo
Inkqubo yokutyunyuzwa kwezinto egqibezela ukwaluphala yesibini kunye nenkqubo yokufaka inokusetyenziswa ngabathengi ukukhetha isityumzi esimanzi esimanzi, esiguqula umxholo wokufuma kwezinto zoluhlu kuluhlu olubanzi.
Emva kokutyumza impahla eluhlaza, yongeza ezinye izakhamzimba okanye izinto ezincedisayo ngokomgaqo, kwaye usebenzise umxube oxwesileyo okanye omileyo ngexesha lenkqubo yokuvuselela izinto ezirhabaxa kunye nesongezelelo ngokulinganayo.
Ngaphambi kokuhlanjululwa, ukuba umswakama wezinto eziluhlaza ungaphezulu kwama-25%, kunye nomswakama othile kunye nobukhulu beengqungquthela, amanzi kufuneka abe ngaphantsi kwama-25% ukuba isomisi sedrama sisetyenziselwa ukomisa.
Umatshini omtsha we-organic granule usetyenziselwa ukugrumba izinto zokwenza iibhola ukugcina umsebenzi wentsholongwane. Izinga lokusinda kwamagciwane usebenzisa le granulator lingaphezulu kwama-90%.
Umxholo wokufuma kweengqekembe zegranulation zimalunga ne-15% ukuya kuma-20%, ethi igqithe ekujoliswe kuko ngokubanzi. Ifuna oomatshini bokomisa ukuhambisa kunye nokugcina isichumisi.
Imveliso eyomileyo ingena kwi-cooler nge-conveyor belt. Ukupholisa kwamkela imveliso yokupholisa umoya opholisa umoya ophelisa ngokupheleleyo ubushushu obuyintsalela, ngelixa uqhubeka unciphisa umxholo wamanzi amasuntswana.
Sinikezela ngomgangatho ophezulu kunye nokusebenza okuphezulu komgqomo we-sieving ukufezekisa ukuhlelwa kwezinto ezisetyenzisiweyo kunye neemveliso ezigqityiweyo. Izinto eziphinda zenziwe ntsha zibuyiselwa kwi-crusher ukuze ziqhubekeke phambili, kwaye imveliso egqityiweyo ihanjiswe kumatshini wokutyabeka isichumisi okanye ngqo kumatshini wokupakisha ozenzekelayo.
Imveliso egqityiweyo ingena kumatshini wokupakisha ngebhanti yokuhambisa. Yenza ubungakanani kunye nokupakisha okuzenzekelayo kweemveliso ezigqityiweyo. Umatshini wokupakisha unoluhlu olubanzi oluninzi kunye nokuchaneka okuphezulu. Idityaniswe nomatshini wokuthunga ohambisa iimpahla kunye nomphambili wokuphakamisa. Omnye umatshini ubhetyebhetye kwaye kakuhle. Ukuhlangabezana neemfuno zokupakisha kunye nokusetyenziswa kwendalo yeempahla ezahlukeneyo.